क्रिकेट विश्वकपका १० पाका खेलाडी | | Neplays.com
काठमाडौं, १८ वैशाख । यसै महिना शुरु हुन लागेको आईसीसी विश्वकप क्रिकेटका लागि सवै टिमले तयारी गरिरहेका छन् । विश्वकप खेल्ने १० वटै टिमले टिम घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
३० मे देखि इंग्ल्याण्डमा आयोजना हुन लागेको विश्वकप क्रिकेटमा युवा खेलाडीहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । तर केही अनुभवि तथा पाका उमेरका खेलाडीहरु पनि यो विश्वकप खेल्दैछन् । सबैभन्दा पाका खेलाडीको रुपमा इमरान ताहिर, क्रिस गेल, महेन्द्रसिंह धोनी र शोयब मलिक रहेका छन् ।
माथी नाम उल्लेख गरेका खेलाडीहरु ३५ वर्ष भन्दा बढीका हुन् । सामान्यतया ३५ वर्ष भन्दामाथि खेलाडीहरुले आफूलाई ‘फिट’ राख्न चुनौती नै हुन्छ । तर क्रिस गेल, इमरान ताहिर, महेन्द्रसिंह धोनी जसता अनुभवि खेलाडीहरु अहिले पनि उत्कृष्ट फर्ममा रहेकाले आसन्न विश्वकप युवाहरुका बीचमा अनुभवि खेलाडीको समिश्रणले झनै रोमाञ्चक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आसन्न विश्वकपलाई क्रिस गेल र महेन्द्रसिंह धोनीले अन्तिम विश्वकप भनेकाले उनीहरुको प्रदर्शनमा पनि सबैको ध्यान केन्द्रीत हुने छ ।
१० अनुभवि खेलाडीहरु
१. क्रिस गेल
वेस्टइन्डिजका क्रिस गेल ३९ वर्ष २१६दिनका छन् । उनले २८९ खेलमा १० हजार १ सय ५१ रन बनाएका छन् । उनले १९९९ मा भारतविरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेटमा डेव्यु गरेका थिए ।
२. शोयब मलिक
पाकिस्तानका शोयब मलिकको उमेर ३७ वर्ष ७६ दिन छ । उनले २ सय ८२ खेलबाट ७ हजार ४ सय ८१ रन बनाएका छन् । उनले १९९९ मा वेस्टइन्डिज विरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
३. जीवन मेन्डिस
श्रीलंकाका जीवन मेन्डिसको उमेर ३६वर्ष ९३ दिन छन् । उनले जम्मा ५४ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् भने उनले ६०४ रन बनाएका छन् । उनले २०१० मा जिम्बावेविरुद्ध डेव्यु गरेका थिए ।
४. हाशिम अमला
दक्षिण अफ्रिकाका हाशिम अमलाको उमेर ३६वर्ष १८ दिन छ । उनले १७४ एक दिवसीय क्रिकेटमा ७ हजार ९ सय १० रन बनाएका छन् । अमलाले २००८ मा बंगलादेशविरुद्ध डेव्यु गरेका थिए ।
५. शन मार्स
अस्ट्रेलियाका शन मार्स ३५ वर्ष २८० दिनका छन् । उनले ७१ खेलमा २ हजार ७ सय ४७ रन बनाएका छन् । उनले २००८ मा वेस्टइन्डिजविरुद्ध डेव्यु गरेका थिए ।६
६. लासिथ मालिंगा
श्रीलंकाका लासिथ मालिंगाको उमेर पनि ३५ वर्ष २३३ दिन पुगेको छ । उनी बलर हुन् । २१८ खेलबाट मालिंगाले ३सय २२ विकेट लिइसकेका छन् । उनले यूएईविरुद्ध २००४ को एशिया कपमा डेव्यु गरेका थिए ।
७. मशरफे मुर्तजा
बंगलादेशका मशरफे मुर्तजाको उमेर ३५ वर्ष १९३ दिन रहेको छ । उनले २०५ खेलबाट २५९ विकेट लिन सफल भएका छन् । मुर्तजाले २००१ मा जिम्बावेविरुद्ध डेव्यु गरेका थिए ।
८. रस टेलर
न्यूजील्याण्डका रस टेलरले पनि ३५ वर्ष काटि सकेका छन् । उनको उमेर ३५ वर्ष २६दिन रहेको छ । २ सय १८ खेलबाट ८ ह जार २६रन जोडेका छन् । २००६मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध डेव्यु गरेका थिए ।
९. इमरान ताहिर
दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिरको उमेर ४० ववर्ष २३ दिन रहेको छ । उनले ९८ खेलबाट १६२ विकेट लिइसकेका छन् । २०११ मा उनले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
१०. महेन्द्र सिंह धोनी
भारतका महेन्द्र सिंह धोनी ३७ वर्ष पुगि सकेका छन् । ३४१ एक दिवसीय क्रिकेटबाट धोनीले १० हजार ५ सय रन बनाएका छन् । उनले बंगलादेशविरुद्ध २००४ मा डेव्यु गरेका थिए ।
यो रेकर्ड भने तोडिएन :
क्रिकेटमा यसअघि ३० वर्ष देखि माथि लागे पछि अधिकांश खेलाडहरु रिटायर्ड हुन गर्थे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अनुभवि खेलाडीहरुको प्रदर्शनले युवा खेलाडीहरुलाई पनि थप फाइदा पुग्ने भन्दै केही खेलाडीहरुलाई मौका दिन चलन छ ।
अहिले ४० वर्ष कटेका इमरान ताहिर आउँदो विश्वकपका सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी हुन् । तपाईलाई थाहा छ, ४७ वर्षको उमेरमा पनि विश्वकप खेलेका छन् । ती हुन् नेदरल्याण्डका नोलान क्लार्क उनी १९९६ को विश्वकप खेल्दा ४७ वर्ष २५७ दिनका थिए । उनी नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उमेरका विश्वकप क्रिकेट खेल्ने खेलाडीको सूचीको पहिलो नम्बरमा दर्ज भएका छन् । दैनिक भास्कबाट